राप्रपाको विरोध चुनावी मसला, अदालत जान हिच्किचाहट
प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ७ सोमबार , २,२०५ पटक हेरिएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो विधानमा उल्लेख हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था भन्ने शब्दावली हटाउन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय असंवैधानिक भनिरहेकै बेला कानुनी उपचारको विषयलाई चुनावी मसला बनाएको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
एक जना राजनीतिक विश्लेषकले अहिले सबैलाई चुनावी मसलाई चाहिएको टिप्पणी गर्दै कुनै पनि संवैधानिक निकायले संविधान र कानुन अनुसार नै निर्णय गर्ने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘राज्यका कुनै पनि निकायले कानुनी परामर्शविना निर्णय गर्दैनन् । कसैलाई शंका लागे कानुनी उपचारमा जान सकिन्छ । बाटो सजिलै छ । सडक तताउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
निर्वाचन आयोगले नयाँ संविधानको व्यवस्थासँग विधानका ती शब्दावली मेल नखाएको र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०५८ को दफा पनि आकर्षण हुने भएकाले राप्रपाको विधान संशोधनका लागि वैधानिक निर्णय गरेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, निर्वाचनको प्रमुख कर्ता मानिने राजनीतिक दलले नै संवैधानिक आयोगमाथि प्रश्न उठाई सडक संघर्ष गर्नुको औचित्य नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
राप्रपाले आयोगले गरेको निर्णय गैर संवैधानिक भनिसकेकाले कानुनी उपचारमा जान सकिने सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्याधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन बमोजिम नै हुनु पर्ने हो । किन कि आयोग संवैधानिक निकाय हो । संविधान र कानुन अनुरुप नै निर्णय गरिएका हुन्छन् । हल्का रुपमा कुनै निकायले निर्णय गर्दैनन् । राप्रपालाई शंका लाग्यो र गैर संवैधानिक लागेको भए कानुनी उपचारमा जान किन हिच्किचाएको ?
अदालतको बाटो त सबै भन्दा सजिलो छ । यति सजिलो अदालत छ । अदालतले यति धेरै स्टेअर्डर जारी गरिरहेको छ । फैसला गरिरहेको छ । व्याख्या गरिरहेको छ ।’ उहाँहरु किन ढिलाई गरिरहनु भएको छ । आयोगलाई विश्वास नगरे अदालतलाई त विश्वास गरिनु पर्ने हो, श्रेष्ठले भने ।
अदालतलाई विश्वास नगरेको हो ?
राप्रपाको अदालत जाने विषयको गाम्भीर्यता फितलो देखिएको टिप्पणी सुरु भइसकेको छ । राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुन्ती कुमारी शाहीले भनिन्, ‘अदालत जाने विषयमा कुरा भइरहेको छ । ढिलाई गरेका होइनौँ ।’ अनि के अदालतलाई विश्वास नगरेको हो ? बचाउ गर्दै उनले भनिन्, ‘अदालतलाई विश्वास नगर्ने कुरा त हुँदैन ।
हामीले आयोगलाई यसअघि निर्णयमा पुनःविचार गर्न भनेका थियौँ । त्यसो भएन । अब हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । त्यसको प्रतिक्रिया के आउँछ ? सोही आधारमा अदालत जाने नजाने विषय निर्धारण हुन्छ ।’ प्रमुख सचेतक शाहीले ज्ञापनपत्रपछि आयोगले निर्णय पुनःविचार गर्ने बताईन् । उनले आयोगले निर्णय पुनःविचार गरे कानुनी उपचारमा नजाने समेत जानकारी दिएकी छन् ।
पार्टी प्रवक्ताले समेत आफुहरु तयारीमा रहेको तर छलफल भइरहेको बताइन् । कानुनी उपचारमा जाने घुर्की लगाइरहेको राप्रपाले आयोगको निर्णयलाई चुनावी मसला बनाएको टिप्पणी भएपछि राप्रपाका नेताहरुको प्रतिक्रिया लिँदा खुलेर कुरा आएनन् । उनीहरुले विरोधलाई चुनावी प्रचारको रुपमा प्रयोग गरेको संकेत दिए ।
प्रमुख सचेतक साहीले नै आफुहरु आयोगलाई गल्ति स्वीकार गर्न लगाउने पक्षमा रहेको आशय जनाइन् । राप्रपा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनावी मसला बनाइरहेको र आगामी चुनावमा आफु बलियो हुने दाउमा लागेको शंका गर्न थालिएको छ ।
कानुनका एक जना जानकारले सरकारको विशेषाधिकारभित्र पर्ने आइजीपी नियुक्तिको विषय अदालत जान सक्छ भने, संवैधानिक निकायले राजनीतिक दलको विधान सच्याउने निर्णय गर्दा अदालत जान हिच्किचाउनु शंकाको विषय हो– भनेका छन् ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट राज्यमन्त्रीमा विष्ट र शर्मालाई सिफारिस
पाँचथर राप्रपामा भाँडभैलो, थाम्सुहाङलाई कारवाही गरी थापालाई बनाइयो अध्यक्ष
राणाको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदै
पशुपतिको राप्रपा २ नम्बर प्रदेशमा माहोल तताउँदै
सत्तारुढ दलको योजनाबद्ध हाम्रो पार्टी बिभाजन गरे : नेता गिरी
दल विभाजन हुँदा किर्ते दस्खत भएको भन्दै राप्रपाले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो
राप्रपा नेता संग्रौलाको निधन
राप्रपाले ह्विप उल्लंघन गर्ने १८ सांसदलाई कार्वाही गर्ने
राप्रपाका १९ सांसद मात्रै उपस्थित, ह्वीप उलंघन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने